Imibuzo Ebuzwa Njalo - Amaphakethe weBeroean - Ukubuyekezwa kweWebhu.org
Ngubani osemuva kwaleli sayithi?
Kunezingosi eziningi kwi-intanethi lapho oFakazi BakaJehova bengaya khona ngenhlangano. Lokhu akuyona enye yazo. Inhloso yethu ukutadisha iBhayibheli ngokukhululeka futhi sihlanganyele ubudlelwane bobuKristu. Abaningi balabo abafunda futhi / noma abanikela njalo kule ngosi ngokusebenzisa imibono bangoFakazi BakaJehova. Abanye bayishiyile iNhlangano noma abanakho ukuxhumana okuncane nayo. Futhi abanye abakaze babe ngoFakazi BakaJehova kodwa bakhangwa umphakathi wamaKristu okhulele eduze kwalesi siza eminyakeni embalwa edlule.
Kulondolozwa ukungaziwa kwakho
Abaningi abalithanda ngokweqiniso iqiniso futhi bajabulela ukucwaninga okungashintshi kweBhayibheli baye bazwakalisa ukubonga ngenkululeko yokukhuluma etholakala kule nkundla. Kodwa-ke, isimo somphakathi woFakazi BakaJehova kulezi zinsuku sinjalo ukuthi noma yiluphi ucwaningo oluzimele olungaphandle kwemihlahlandlela yenhlangano lukhuthazwa kakhulu. I-specter yokususwa ekuhlanganyeleni ilenga phezu kwanoma yimuphi umsebenzi onjalo, idala isimo sokwesaba okungafani neze nesamaKristu akhonza ngaphansi kokuvinjelwa. Empeleni, kufanele siqhubeke nocwaningo lwethu ngomshoshaphansi.
Ukuphequlula Indawo Yethu Ngokuphephile
Ngokuqinisekile ungafunda okuthunyelwe namazwana akulesi sayithi ngokuphepha njengoba ukufundwa okwenziwa kungalandelwa. Kodwa-ke, uma abanye bekwazi ukufinyelela kwikhompyutha yakho, bayabona ukuthi yimaphi amasayithi owavakashele ngokuskena umlando wesiphequluli sakho. Ngakho-ke kufanele usule umlando wesiphequluli sakho njalo. Uma ungazi ukuthi ungakwenza kanjani lokhu, isixazululo silula noma ngabe usebenzisa yiphi idivayisi. Mane uvule injini yokusesha oyikhethile (ngincamela i-google.com) bese uthayipha “ngingawusula kanjani umlando ku- [igama ledivayisi yakho]”. Lokho kuzokunikeza lonke ulwazi oludingayo.
Ukulandela Isiza Ngokuphephile
Uma uchofoza inkinobho ethi “Landela” uzokwaziswa nge-imeyili njalo lapho kushicilelwa okusha. Ayikho ingozi inqobo nje uma i-imeyili yakho iyimfihlo. Noma kunjalo, izwi lesixwayiso. Uma ufunda i-imeyili efonini noma kuthebhulethi yakho, kuhlale kunethuba lokuthi othile azoyibona. Bengisehholo ngelinye ilanga egumbini lokugezela lamadoda ngenza okwenziwa ngamadoda endlini yangasese lapho kungena ubhuti othile wabona i-iPad yami engangisanda kuyibeka ekhawunteni. Ngaphandle kokuthi 'ngekhefu lakho' wayikha phezulu wayivula. Ngenhlanhla, ngine-password yami evikelwe, ngakho-ke akakwazanga ukufinyelela. Ngaphandle kwalokho, uma into yokugcina ebengiyifunda bekuyi-imeyili yami, ubezoyibona njengesikrini sakhe sokuqala. Uma ungayazi ukuthi uyivikela kanjani nge-password ifoni yakho, vele ubuyele ku-google bese uthayipha into efana nokuthi “Ngilivikela kanjani iphasiwedi i-iPad yami [noma ngabe iyiphi idivayisi]”.
Uma ufisa ukuphawula noma ukubuza imibuzo, ungakugcina kanjani ukungaziwa kwakho? Empeleni kulula kakhulu. Ngincoma ukuthi wakhe ikheli le-imeyili elingaziwa usebenzisa umhlinzeki onjenge-Gmail. Iya ku-gmail.com bese uchofoza inkinobho Yakha i-Akhawunti. Uma utshelwa igama lokuqala nesibongo, sebenzisa igama elenziwe. Ngokufanayo negama lakho lomsebenzisi / ikheli le-imeyili. Qiniseka ukuthi usebenzisa iphasiwedi eqinile. Unganiki usuku lwakho lokuzalwa lwangempela. (Ungalokothi unikeze usuku lwakho lokuzalwa lwangempela kwi-intanethi ngoba lokhu kusiza amasela wobunikazi.) Ungagcwalisi umakhalekhukhwini nezinkundla zamanje zekheli le-imeyili. Qedela ezinye izinkambu eziyimpoqo bese uqedile.
Ngokusobala, ngeke ufune ukulayisha isithombe uma uzama ukuvikela ukungaziwa kwakho.
Manje uma uchofoza inkinobho ethi Landela kusayithi le-Beroean Pickets, sebenzisa ikheli lakho le-imeyili engaziwa ukuqedela leli fomu.
Ngokwegama elingaziwa kakhulu — uma ngabe uhlanyiswa noma uqaphe kakhulu — ungasebenzisa isifihli sekheli le-IP. Ikheli lakho le-IP linamathiselwe kuwo wonke ama-imeyili owathumelayo. Leli ikheli lelo umhlinzeki wakho wesevisi ye-intanethi akunikeza lona futhi elizotshela umamukeli indawo okuyo yonke indawo, uma kwenzeka ethatha umzamo wokuyibheka. Ngivele ngabheka okwami ​​futhi kukhombisa njengeDelaware, e-USA. Noma kunjalo, angihlali lapho. (Noma ngiyenza?) Uyabona, ngisebenzisa insiza yokufihla i-IP. Awudingi ukuya kuleli banga uma ungalokothi usebenzise ikheli lakho le-imeyili elisha, kepha uma wenza kanjalo, ungalanda umkhiqizo ofana ne-Tor Browser kusuka kule ndawo: https://www.torproject.org/download/download
Lokhu kuzosebenza ngesiphequluli sakho ukuze kuthi lapho ufinyelela kwi-inthanethi, noma isiphi isayithi oya kulo unikezwe ikheli le-imeyili lommeli. Kungabonakala ukuthi useYurophu noma e-Asia kunoma ngubani okhetha ukuzama ukukulandela.
Imiyalo iqonde ngqo phambili futhi ihlinzekwa yi-Tor web site.
Ngeminye imihlahlandlela yokuphepha Chofoza lapha
Samukela imibono. Kodwa-ke, njenganoma iyiphi iwebhusayithi enesibopho, kunemithetho yokuziphatha eyamukelekayo egcinelwa inhlalakahle yomphakathi oyisebenzisayo.
Esikukhathalelayo kakhulu ukugcina indawo yokwethembana, ubudlelwano obusekelayo kanye nesikhuthazo, lapho oFakazi BakaJehova abavusa iqiniso leNhlangano bezizwa bezwakala futhi bevikelekile.
Ngoba Inhlangano YoFakazi BakaJehova, njengabaholi benkolo bamaJuda bosuku lukaJesu, izoshushisa ngokuxosha noma ngubani ophikisana nencazelo yabo yemiBhalo, kuyalulekwa ukuthi bonke abaphawulayo basebenzise igama elingaziwa. (John 9: 22)
Njengoba sizobe samukela konke ukuphawula ngenhloso yokuqinisekisa imvelo eyakhayo, sizodinga bonke abaphawulayo ukuthi banikeze ikheli le-imeyili elifanele esizoliphatha ngokuyimfihlo kakhulu. Ngaleyo ndlela uma kunesizathu sokuvimba ukuphawula, sizokwazi ukwazisa ophawulayo ukuze akwazi ukwenza ukulungisa okufanelekile.
Lapho wenza umbono lapho ufisa ukuchaza khona imfundiso ethile yeBhayibheli, sicela uqaphele ukuthi sidinga bonke banikeze ubufakazi obuvela emiBhalweni. Ukugcizelela inkolelo ethi akuyona into edlula umbono womuntu evunyelwe, kepha sicela usho ukuthi kungumbono wakho futhi akukho okunye. Asifuni ukuwela ogibeni lweNhlangano futhi sidinga ukuthi abanye bamukele ukuqagela kwethu njengeqiniso.
Qaphela: Ukuphawula, kufanele ungene ngemvume. Uma ungenalo igama lomsebenzisi le-WordPress Log In, ungalithola ngokusebenzisa isixhumanisi seMeta kubha eseceleni.
Ingeza ukufometha kumazwana akho
Ungayisebenzisa Kanjani Ifomathi Kumazwana Akho
Lapho udala ukuphawula, ungaqalisa ukufometha usebenzisa i-angle bracket syntax: “ ”Ezinye izibonelo zikhonjisiwe ngezansi.
Le khodi: Boldface
Izokhiqiza lo mphumela: Isibindi
Le khodi: Omalukeke
Izokhiqiza lo mphumela: Okungokwemvelo
Bheka Xoxa ngeQiniso .
Hlola Xoxa neqiniso.
Nawa amasayithi amaningi ku-inthanethi lapho oFakazi BakaJehova bangaya khona ukuthola ulwazi mayelana neNhlangano. Lokhu akuyona enye yazo. Inhloso yethu ukutadisha iBhayibheli ngokukhululeka futhi sihlanganyele ubudlelwane bobuKristu. Abaningi balabo abafunda futhi / noma abanikela njalo kule ngosi ngokusebenzisa imibono bangoFakazi BakaJehova. Abanye bayishiyile iNhlangano noma abanakho ukuxhumana okuncane nayo. Futhi abanye abakaze babe ngoFakazi BakaJehova kodwa bakhangwa umphakathi wamaKristu okhulele eduze kwalesi siza eminyakeni embalwa edlule.